Ubomi bomntu siqu kaKristuina Asmus noGarik Kharlamov
Ibali lomthando lo mbhangqwana lingazenza njengamagama amnandi-melodrama: umfazi omhle, othobekileyo uyathandana ne-hooligan ephazamisayo. Kwimeko nayiphi na into, impela isimo sengqondo esibhekiselele ku-Christina Asmus noGarik Kharlamov savela ngenxa yemifanekiso yesikrini eyazisa abaculi bezobugcisa.
U-Christina Asmus noGarik Kharlamov bahlangana njani?
Umdlali omncinci waseScheckpkinsky osemncinci wathandwa ngabafundi bakhe, xa efumana indima yeVary Chernous kwi-series "Interns". Ebomini, uKhristina unemiba efana ne heroine yakhe - njengesidima kunye neentloni.
Kwi-TV ye-Comedy Club, uGarik Kharlamov ungomnye wabemi abadumileyo. Kulo nqanaba, umbonisi wenza umfanekiso wesimo esingenangqondo, isicacisi esichaphazelekayo esinomqondo ohlekileyo wehlazo, olwahlukileyo.
Nangona uKristina noGarik basebenzisana ndawonye iminyaka emithathu kwisiteshi esisodwa se-TNT, baze badibana nakwiziganeko ezininzi, babonisana ... kwi-Intanethi. Akukho ncwadana engabalulekanga kwi-Twitter ngokukhawuleza yazisa abaculi. Njengoko uKhristina wabaxelela kamva, bacinga ukuthandana kwintanethi yentlalo ukuze kube yintlungu yobudlelwane.
Ngeveki kamva, uKharlamov noAsmus banquma ukuqhubeka beqhelana nabo kwimodi yefowuni, kwaye ngoko ulwalamano luye lwaba lube yintando enobudlova.
UKristina Asmus noGarik Kharlamov - umtshato okhuni kunye nomtshato wokukhohlisa
Xa u-Christina Asmus noGarik Kharlamov baqala ukutshata, umboniso wayetshatile. Ngomfazi wakhe uYulia Leschenko, umculi wahlala iminyaka eyisixhenxe, ezimbini zazo-ngomtshato osemthethweni.
UJulia, ngokuqhelekileyo kwenzeka, wafunda ngako konke oku. Intombazana yayingenakucinga ukuba intanda yakhe imkhohlise ngeenyanga eziliqela. Xa ebuza umyeni wakhe imibuzo ngokuthe ngqo, waphika konke. U-Julia wayekhathazekile, evekile, wayengenakuqonda into.
Kwi-Star Party, ngelo xesha, kwakukho kakade ukuthetha ukuba uKharlamov wayenomdla kunye nenkwenkwezi ye-Internov. Amaninzi amaninzi amgweba uKristina, owaba ngu "razluchnitsya". NgokukaYulia Leshchenko, umyeni wakhe wamcela ukuba aqhawule umtshato, kwaye emva kweveki kamva wabhala kwiphepha lakhe kwintanethi yezonxibelelwano ezinyangeni ezintlanu kwimeko yomtshato:
Ngokubhekiselele kubudlova obungaqondakaliyo kwi-@AsmusKristina kunye nomdla wokutshatyalaliswa koxinzelelo obomvu kwiinkalo zethu: 1. Ndiye kwimeko yokuqhawula iminyaka engaphezu kweenyanga. 2. Andizange ndihlale nomfazi wam inyanga ezintathu. 3. Akunabantwana. Akukho mntu wandithatha naphi na! Kule, mhlawumbi, yonke into. Ndiyabonga. Ikhefu. Hayi, ewe ... Ndidibana noChristina Asmus
Ukususela kulo mzuzwana, uKhristina noGarik abafihla ubuhlobo babo. Iqabane lihlala lifikelela kwiilensi zabafoto bezithombe, ngelixa zibini zigxininisa ukuba zingumyeni nomfazi.
Kungekudala kuyacaca ukuba uAsmus ulindele umntwana.
UGarik Kharlamov ubika iingxelo zakutshanje ngobomi bakhe kwi-Twitter:
Musa ukuyeka iingxabano kunye nokucinga ngokuphila kwethu. Ukuze kuqinisekiswe ama-experiencers. Sitshatile, sisekwinyanga yesi-5!
Abathandana baze bahlela umtshato kubahlobo babo, kodwa ngomzuzu wokubhiyozela i-showman yayisatshata ngokusemthethweni kuYulia Leschenko. Eli bhinqa alizange likhawuleze ukuqhawula umtshato. Umhla umtshato owawupheliswa ngawo wawubizwa ngokuba yiyo inkundla ekupheleni konyaka ka-2012, kodwa abameli bakaLeschenko banengxaki kulo mhla. Ngenxa yokuhlaziywa kwimeko, umtshato wokuqhawula uGarik Kharlamov noYulia Leshchenko ngo-Oktobha 10, 2013.
Ngelo xesha, igqwetha likaJulia lafumanisa ukuba phakathi kuka-Igor Kharlamov noKristina Asmus, umtshato wabhaliswa ekuqaleni kukaJuni 2013 kwelinye leeofisi zokubhalisa kweso sixeko, oko kukuthi, ngaphambi kokuba umtshato wokuqala ugqitywe ngokusemthethweni. Ngaloo ndlela, umtshato osemthethweni we-showman kunye noCristina Asmus unokuqwalaselwa ngokungekho mthethweni.
Intsapho yokwenene - uKristuina Asmus noGarik Kharlamov kunye nentombi yakhe, ifoto
Ibali elimnyama lokwahlukana, umtshato kunye nomtshato kubonakala kuvuyiswa kakhulu kwiifestile zababini, kodwa kungekhona. Emva kokusasaza umtshato onzima nomfazi wakhe wokuqala, uGarik Kharlamov kunye nomfazi wakhe omtsha, u-Christina Asmus, babonakala bengakhathazeki ngabo bonke kuba babeba ngamaqhawe amakhulu kwixesha elidlulileyo.
Esi sibini sasinandipha ubudlelwane babo kwaye sasihlala silindele ukuzalwa komntwana - abazali abaza kufuna oogqirha abanolwazi, bathenga isikhalazo, umqhubi, i-ryoshonki kunye neetys. UChristina Asmus wabelane ngeendaba zakutsha kwi-instagram yakhe. Ngelo xesha, umdlali we-actress akazange aphendule kwiingcamango ezingathandabuzekiyo ezibhekiswe kuye, ngezikhathi ezithile ebonakala kwiphepha lakhe.
Xa, ngoJanuwari 2014, uKhristina Asmus noGarik Kharlamova babenentombi, u-Anastasia, isibini esitshatileyo sichaza iindaba ezivuyayo kwiimbonakalo zazo:
Ukuhlambalaza, ungancoma, ngokuba namhlanje ndinomntwana obalaseleyo emhlabeni ukususela kumntu obalaseleyo emhlabeni. Andiyikuziva nje, kodwa ngomlingo
Kwam, le mini ibe yintle ebomini. Ngoku ndiyiPapa Harlo, kodwa umfazi wam othandekayo ungumqhawe wamambala!
Emva kokuzalwa kwentombi yakhe u-Christina akazange ahlale kulo myalelo. Kwiiveki zintathu, umdlali we-actress wabuyela kwisimo esiqhelekileyo waza wabuyela kwi-Yermolova Theater, apho wabonakala khona kwisigaba kwendima ye-Ophelia kwi-premiere ukusebenza "Hamlet".
Abaninzi ababhalisile baphuthuma ukugweba u-Kristina, owathi wagqiba ukuya emsebenzini ngokukhawuleza, kodwa wakwazi ukudibanisa ngobuchule bobabini kunye nesigaba. Ngaphandle kokusebenza, uAsmus akazange ayeke ukuncelisa intombi yakhe.
Ukuqwalasela iifoto ezichaphazelayo kunye nokuvuma ngokunyanisekileyo kwi-microblogs yakhe, uKristina Asmus noGarik Kharlamov bayavuya ngokwenene. Abafazi bachitha ixesha labo lokukhulula kunye.
Umdlali ohamba naye uhamba nomyeni wakhe kuwo wonke umbhobho obomvu kunye nemikhosi, lo mbhangqwana uphumla kunye kwaye uphume ekukhanyeni.
Imifanekiso edibanisayo ikhuluma ngokucacileyo malunga nokuba umanyano kaKristuina Asmus noGarik Kharlamov, oye waphonononga iimvavanyo ezininzi ezinzulu, uqina ngakumbi imihla ngemihla.
U-Alla Berger no-Alexei Vorobyov: isibini esona sibini se-show "Bach-4"
Abafazi abathandayo kunye nobomi bomntu kaDanila Kozlovsky
U-Alexander Panayotov: iindaba zakutsha-u-2017 ubomi bomculi - Utshatile okanye ungumfana? Iifoto eziqhelekileyo ukusuka kwi-Instagram Panayotov
Ukugcinwa kwezixhobo zasekhaya
Ividiyo ene-naked Evelina Bledans ngokukhawuleza yabonwa ngabasebenzisi be-intanethi
Iimpawu ezahlukileyo ze-Azerbaijan
Inkukhu ebhakawa ngeeshizi kunye nemifuno
Ukugcina umtshato ongonwabile okanye umtshato?
I-pie ne-giblets yenkukhu
Indlela yokuba yindoda ebusweni emehlweni omntu
Unokukunceda njani umntu ukuba alahlekelwe isisindo
Izifo zomlenze kunye nentlungu yangemva
Inkukhu ebhakawa ne-cream yaseFiladelphia, ite
Ukuziphatha kwabasetyhini kwiintsuku ezibucayi
Ukukhulelwa kwesibili kunye nempawu zayo
I-Peanut halva: inzuzo okanye inzakalo
I-currant jam (i-Kiev)